बतासे झर्ना हेर्न आन्तरिक पर्यटककाे भिड
शुक्लाफाँटा । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ चुरे फेदीमा रहेको बतासे झर्ना आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउन हुन थालेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदै जादा जोखिम बढे पनि झर्ना पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा कुनै कमी आउन सकेको छैन । दैनिक झर्ना अवलोकन र झर्नाको पानीमा नुहाउनेको सङ्ख्या थपिँदै जादा कोरोनाको जोखिम उत्तिकै बढेको छ ।
पर्यटन विकासका लागि बन्दीपुरमा यसरी धमाधम भइरहेको छ काम
तनुहँ । अबको २० वर्षपछि तनहुँको बन्दीपुरमा पुग्ने कुनै पर्यटक कति दिन बास बस्लान ? बन्दीपुर आएका पर्यटकलाई कसरी भुलाउने ? यसकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर बन्दीपुर गाउँपालिका गुरुयोजना बनाएर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा जुटेको छ । यस आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य बन्दीपुर पुग्ने पर्यटकलाई जतिसक्यो धेरै दिन बास बसाल्नु हो ।
काठमाडौँ । समृद्ध सिन्धुली अभियानले सिन्धुलीगढीमा तत्कालीन अंग्रेजी सेनालाई परास्त गरेको दिनका अवसरमा सिन्धुलीगढी चित्र कथा पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, सांसद हरिबोल गजुरेल, सांसद गणेश पहाडी, इतिहासकार प्राध्यापक दीनेशराज पन्तले सो पुस्तकको आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरे ।
शुक्लाफाँटामा कृष्णसारको बथान (फोटोमा)
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको हिरापुर फाँटामा संरक्षित कृष्णसार । उचित बासस्थानका कारण कृष्णसारको संख्या संरक्षण क्षेत्रका एक सय बढी पुगेको छ ।
बर्दिया। पर्यटन क्षेत्र खुला गर्ने सरकारी निर्णयसँगै ठाकुरद्वारामा रहेका अधिकांश होटल सरसफाइ गरेर पर्यटकलाई सेवा दिन तयार देखिएका छन् । लामो समयदेखि बन्द रहेका यस क्षेत्रका होटलले व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरसफाइ र मर्मत सम्भारको कामलाई तीव्रता दिएका छन् ।